I-shampoo eyomileyo: iimpawu, ukusetyenziswa kunye neengcebiso | Amadoda aQinisekileyo
Yima kubafazi kunye namadoda ishampu eyomileyo iyanceda ukugubungela iimfuno ezinkulu zokuhlamba kodwa ngokukhawuleza. Abantu abaninzi abazi ubunjani bale mveliso kwaye bakhetha ukuqhubeka nokusebenzisa ishampu yesiko. I-shampoo eyomileyo ineempawu ezininzi ezinokusisindisa ngaphezulu kwesihlandlo esinye kwaye incede ukugcina iinwele zisempilweni.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukuba likuxelele iingcebiso malunga ne-shampoo eyomileyo kunye neempawu zayo.
1 Sebenzisa ishampu eyomileyo
2 Uyisebenzisa njani ishampu eyomileyo
3 Iimpawu ezahlukeneyo
Sebenzisa ishampu eyomileyo
Isetyenziselwa ukugcina iinwele zijongeka zicocekile kwimeko engxamisekileyo apho singenaxesha lokuzihlamba ngesiqhelo. Kananjalo abantu abaninzi bayayisebenzisa ukuyinika ukukhanya ngakumbi okanye ivolumu. Abanye abantu bayayisebenzisa nasemva kokuba beyihlambile gcina ii-bangs ezifanelekileyo usuku lonke. Kwabo bafazi nabasetyhini baneenwele ezinamafutha kunokuba yinto elungileyo. Kwaye iluhlobo lwepraypray elincedayo ekwenzeni izinto zokukhusela iinwele.
Kunokuthiwa kusebenza ngokufanayo naxa usebenzisa imveliso elungileyo kakhulu kulusu ngaphambi kokufaka isiseko. Kwabo bantu banxibe ii-bangs, ngokuqinisekileyo bayazi ubuhle be shampoo eyomileyo. Kwaye ivumela ukuphucula eli candelo leenwele elihlala lingcolile kwaye linamafutha ngaphezulu kwezinye ngenxa yokusondela kolusu lwebunzi. Siyazi ukuba ibunzi lithambekele ekubeni linamafutha ngakumbi kuba libonakalisiwe kwiiarhente zokusingqongileyo kunye nongcoliseko. Sisoloko sinikana omnye nomnye ngezandla zethu kwaye konke oku kubangela ukutyeba okukhulu.
Sukucinga ukuba lilungile Imveliso egqibeleleyo yokufezekisa ukuthungwa kunye nevolumu ngaphambi kweenwele ezithile, kodwa ikwangumlingane ogqibeleleyo wokuhamba. Ngamanye amaxesha xa ungenalo ixesha lokuhlamba iinwele zakho kwaye wandise ukhathalelo kakuhle, kunokunceda ukubonakala kweenwele ezicocekileyo. Kananjalo akufuneki uyihlukumeze ngeshampu eyomileyo, kuba ayisiyiyo into eqhelekileyo kwaye xa isetyenziswa kakhulu, inokonakalisa iinwele.
Uyisebenzisa njani ishampu eyomileyo
Kukho izikhokelo eziphambili zokufunda ukusebenzisa ezi ntlobo zeemveliso ngokuchanekileyo. Masingalibali ukuba yonke into enento yokwenza nococeko lomzimba kufuneka isetyenziswe ngobulumko. Masibone ukuba zeziphi izikhokelo eziphambili zokusebenzisa ishampu eyomileyo:
Okokuqala, qiniseka ukuba iinwele zomile ngokupheleleyo. Igama lithetha konke. Kuya kufuneka unwele olomileyo ukuze lusebenze kakuhle.
Isitshizi kufuneka sifakwe kumgama omalunga neesentimitha ezingama-20 ukuya kwezi-30. Kuya kufuneka uhlukanise isicelo ngemicu okanye, kwimeko yamadoda, ngamalungu. Okokuqala, kuyacetyiswa ukuba uqale ukusebenzisa amacala, ukuqhubeka kamva kwindawo ephezulu kwaye ugqibe kwindawo yesibini.
Ukuba iingcambu zakho kodwa zezona zinamanqatha okanye ujonge ukufezekisa umthamo omkhulu, kufanelekile ukuba nefuthe elincinci kule ndawo. Ukuba oku akunjalo, eyona nto ifanelekileyo kukufaka isicelo kuzo zonke iinwele ukufezekisa ubume obuhle.
Ngexesha lesicelo, kubalulekile ukuhambisa iinwele ngeminwe yakho kwaye ubeke intloko phantsi ukuze ingawi ebusweni.
Akukhuthazwa ukuba uyisebenzise kwiiphelo okanye kwezinye iinwele. Kufuneka nje uyifake kwiingcambu nasekhanda.
Kuya kufuneka uyivumele ukuba isebenze imizuzwana embalwa. Emva koko, siyaxubha kwaye sisebenzise iminwe yethu ukususa iintsalela ezinokubakho.
Isomisi sokuvuthela sinokusetyenziswa ukuba nje umoya upholile.
Ingcebiso edla ngokunikwa iingcali ezininzi kukuba kungcono ukuyisebenzisa ngaphambi kokuba ulale. Ukuba awucwangcisi ukuhlamba isigqubuthelo kusasa ngaphambi kokuba uhambe, kungcono ukuyifaka ebusuku. Kwaye imveliso iya kuthatha ioyile kwizinwele xa ulele. Ngentsasa kuya kufuneka uchukumise iingcambu zakho kwaye ukame iinwele zakho rhoqo.
Kukho iindlela ezahlukeneyo ezomileyo zokuthenga kunye nexabiso ukusuka kuma-euro ama-2 ukuya kuma-26 euros.
Siza kubona ezinye zeempawu ezifunwayo emva kwale shampu yomileyo.
It is a ishampu owomileyo ngeendlela ezimbini. Kukho enye yeenwele ezinombala okhanyayo kunye nenye yeenwele ezimnyama. Ngale ndlela, umphumo uyathandwa xa udibanisa uhlobo kunye nohlobo lweenwele zakho. Ifomula ifakwe kwioyile yeargan kwaye ikhusela kwimitha ye-UV. Inezinto ezithile ze-violet zokulinganisa iithoni zobhedu ezikhoyo kwizinwele ezimhlophe. Ngale ndlela, iinwele ezineetoni ezikhanyayo zinokuma ngcono. Ixabiso layo limalunga nama-25 euros. Nangona zibiza kakhulu, iziphumo zazo azinakubethwa.
Le nkampani iphakamisa ukusetyenziswa kwe-shampoo yayo eyomileyo xa ungenalo ixesha lokuhlamba iinwele zakho. Kananjalo kwabo bantu bangahlambi mihla le kodwa bafuna ukubonakala bebahle. Iziphumo zintsha, zicocekile ngeenwele umzimba ohlala ixesha elide kunye nevolumu ngaphandle kwesidingo sokukama iinwele. Ixabiso layo liphantsi kakhulu kuba ukusetyenziswa kwayo kunenye injongo. Ixabiso li-euro ezingama-2.99 kuphela.
Olu hlobo loshampu owomileyo luthatha ioyile egqithileyo ezinweleni kwaye luyivuselele phakathi kokuhlamba. Kuyacetyiswa ukutshiza kwiingcambu ukuthintela ukubonakala kwamafutha. Kuyanceda ukubuyisela iimvakalelo zevolumu yendalo yesigqubuthelo. Nangona inexabiso elithe xhaxhe noko, ijolise kwabo bantu banayo iinwele ezinamafutha kwaye bafuna olu hlobo lwemveliso ngokungxamisekileyo. Ixabiso elili-euro ezili-10.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi ngeshampu eyomileyo, iimpawu zayo kunye nemikhwa enokusetyenziselwa yona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ishampu eyomileyo